Sidee loo ilaaliyaa Koontadayda barta Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Isticmaalaha, mar uu xaqiijiyey in Accountkiisa Twitter uu leeyahay badbaadadaada ayaa wax yeeleysey, waxaa lagugula talinayaa inaad qaaddo taxaddarradan soo socda si aad u Difaacdo Koontadaada: Iska tuur Tweets aan loo baahnayn oo la soo dhejiyay inta amniga waxyeelleeyay.
Sidoo kale, baari kombuyuutarkaaga si aad u aragto fayrasyada iyo furin ku dheji balastarka amniga nidaamkaaga iyo barnaamijyadaada, si joogto ah u isticmaal furaha cusub ee adag, tixgeli ikhtiyaarka isticmaalka xaqiijinta gelitaanka.
En xaqiijinta soo galida, Isticmaaluhu wuxuu fursad u leeyahay inuu soo bandhigo jeeg labaad si loo hubiyo in isaga kaliya uu marin ka heli karo Koontadiisa Twitter-ka ee uusan geli karin dhinacyada saddexaad, iyadoo ujeeddada aan caafimaadka qabin ay tahay waxyeello.
Xadgudubka khadka tooska ah ee barta Twitter
Xaalado badan oo farsamo ayaa ka dhici kara shabakada bulshada ee Twitter; sida, tusaale ahaan: Xadgudubka Internetka. Waxaa jira Twitteros oo lagu soo rogay Xadgudubka Internetka; Haddii Isticmaaluhu garanayo qof nugul, wuu ku caawin karaa isaga oo ka hadlaya Talooyinka soo socda ee ay bixiso Twitter:
Isticmaaluhu waa inuu isku dayaa inuu fahmaan xaalada, inaan si taxaddar leh kuu dhageysto oo aad xaaladdaada si dhab ah u qaadatid; U oggolow qofka inuu raadsado caawimaad xirfad leh: Daaweeye, garyaqaan, sarkaal booliis ah ama qof kale oo lagu kalsoon yahay, oo leh xeelado lagu hago oo lagu hagaajiyo shucuur ahaan.
Sida daawade, Isticmaaluhu wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuusan dan ka lahayn Xadgudubka Internetka oo uu doonayo inuu ilaaliyo qofka ay dhibaatadu saameysey, isagoo ku taageeraya shucuurtooda; ugu dambeyntii, ku soo warbixi waxyaabaha ku jira Twitter adoo raacaya tilmaamaha ku yaal barxadda Twitter-ka.
XADDID IYO JAAHIL XUMO ONLINE TWITTER
Ku xirnaashada tiro aad u tiro badan waxay noqon kartaa khibrad kobcinaysa; laakiin sidoo kale waxay isku amaahisaa inay noqoto il jahwareer iyo is faham la’aan hadaan la fahmin macnaha guud ee wada hadalka.
Markuu Isticmaaluhu arko a Tweets aflagaado ah, waxaa lagugula talinayaa inaad milicsato wada hadalka, sifiican ugu fiirso macnaha guud ee Tweet-ka, oo ah mid gaaban oo ujeedka qoraaga laga yaabo in si qaldan loo fasirto; Sidoo kale, ka jawaab Tweet si aad ugu soo biirto wadahadalka oo aad u gudbiso walaacaaga.
Isticmaaluhu wuxuu ikhtiyaarro ku leeyahay barxadda Twitter-ka ee ah inuu Xannibiyo oo uu iska indhatiro Koonto ku saabsan Tweets-ka weerarka ah Markaad xannibo isticmaale, wax macluumaad ah kama heshid asaga; Sidoo kale kuma arki doontid isdhexgalkaaga waqtigaaga. Waxaan kuu soo jeedinayaa iska dhaaf.
La xiriir Twitter
Isticmaaluhu dhif buu u baahan yahay La xiriir Twitter xallinta dhibaato kasta, maaddaama barta Twitter-ka ay kuu ballanqaadayso dhammaan aaladaha, tilmaamaha, xulashooyinka iyo tilmaamaha si aad ugu dhex socotid shabakaddeeda iyadoo leh nabadgelyo maskaxeed oo aad ugu raaxeysan karto inta ugu badan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo uusan Isticmaaluhu keligiis awoodin xalliyaan dhibaatooyinka kugu dhibaya shabakada bulshada waxaadna u baahan tahay inaad la xiriirto Twitter si aad uga hesho caawimaadda lagama maarmaanka ah khubaradaada xirfadleyda ah
Twitter wuxuu siiyaa Isticmaalaha Xarunta Caawinta ku yaal qayb ka mid ah websaydhkaaga; Halkan waxay ku sharraxeysaa tallaabo tallaabo tallaabo kasta oo Isticmaaluhu u baahan yahay inuu qaado si uu u xalliyo dhibaatooyinka kala duwan ee ku habsaday adeegsiga Twitter.
1 Xadgudubka khadka tooska ah ee barta Twitter
2 XADDID IYO JAAHIL XUMO ONLINE TWITTER
3 La xiriir Twitter